समलिङ्गी र तेस्रो लिङ्गी समुदायका लागि आश्रयस्थल बनाउने मन छ- पिंकी गुरुङ – email khabar | Latest news of Nepal
प्रकाशित : २०७७ चैत २६ गते ९:००
चैत २६ काठमाडौं – पिंकी गुरुङ अहिले निलहिरा समाज ९ब्लू डायमन्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष छन् । उनी तेस्रो लिंगी व्यक्तिहरुको पहिचान र अस्तित्वको लागि कानुनी रुपमै लड्दै आएकी छन् । पछिल्ले समय तेस्रो लिंगी व्यक्तिहरुलाई समाजको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको बताउछन् उनी । उनै पिंकीसंग गरिएको कुराकानी
नेपालमा हालको अवस्थामा तेस्रोलिङ्गी समुदायलाई कुन स्थानमा पाउनुभएको छ ?
नेपालमा तेस्रो लिङ्गी समुदायको अवस्था प्रगतिशीलतातर्फ उन्मुख छ । हिजो लुकेर बसेको यो समुदाय आज खुलेर आवाज मुखरित गर्न अभिप्रेरित छ । समाजमा स्वीकार्यता र संवेदनशीलता बढ्दै छ भने समुदाय आफै पनि सतर्क हुँदै आएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा तेस्रो लिङ्गीहरू अग्रपंक्तिमा आएको पाइएको छ । मोडलिङ क्षेत्रमा अञ्जली लामा, मेकअप आर्टिस्टमा सोफी सुनुवार र व्यवसायीमा मेघना लामा । राज्यले तेस्रालिङ्गीका लागि नागरिकताको हकमा लिङ्गको महलमा ‘अन्य’ भनेर पहिचान दिन सुरु गरिसकेको छ । नागरिकता र पासपोर्ट ‘अन्य’ बाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । राज्यले पहिचानको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । पहिचानसँग जोडिएका अन्य अधिकारहरू अझै राज्यबाट प्राप्त हुन सकेका छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा पहुँच बढ्न सकेको छैन । पारिवारिक र समाजिक बहिष्करणका कारण धेरै तेस्रो लिङ्गी जोखिमपूर्ण व्यवहार सहन बाध्य छ । त्यसैले धेरै साथीहरू एचआइभी÷एड्सजस्ता रोगको संक्रमणमा छन् । धेरै साथी मानसिक समस्यामा पनि छन् । यो लकडाउनमा १९ जनाले आत्महत्या गरे भने १० जनाले आत्महत्याको प्रयास गरेका छन् ।
तेस्रो लिड्डीको राज्यसँगको अपेक्षा के हो ?
विगतका दिनमा कत्तिको चुनौती सामना गर्नुप¥यो ?
जीवनभरका लागि कुनै एउटा वस्तु छोड्नुप¥यो भने के छोड्नुहुन्छ ?
त्यस्तो चमत्कार गर्ने शक्ति प्राप्त भए सबैले सबैलाई माया गर्ने मन र समान देख्ने नजर बनाइदिन्थें ।साभार नारी पत्रिका